Business & Management eBooks - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
17-07-2008, 08:25 AM
Desert Fox, minlatt
Economist - Guide to Investment Strategy
17-07-2008, 08:28 AM
Practical Lean Accounting:
19-07-2008, 04:07 AM
Cisco Press .Global IPv6 Strategies May 2008
Cisco Press .Global IPv6 Strategies May.2008
ပြန်စာ - Business & Management eBooks
Last edited by Aung Aung; 07-09-2008 at 08:31 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကွန်ယက်မှော်ဆရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-07-2008, 11:24 AM
Past ,present & future of retail market
ဆရာကြီးအောင်ထွန်းသက် ရဲ့ Seminor ပါ . . . .
Fundamentals of Financial Management, 12th Edition (Instructors guide ONLY)
by James C. Van Horne, John M Wachowicz
(Step-by-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Management and Analysis )
by Pamela P. Peterson Frank J. Fabozzi Wendy D. Habegger
International Financial Management (3rd Edition)
by Eun / Resnick
21-08-2008, 07:04 AM
mediafire က password ခံရင် error တက်ပါတယ် ၊ တစ်ခါတည်းပဲ အားလုံးဒေါင်းနိုင်အောင် multi source ကနေ pass free ပေးထားပါတယ် ။
Strategic Supply Chain: The Five Disciplines for Top Performance[/b]
Last edited by tu tu; 05-04-2012 at 01:34 PM..
Last edited by tu tu; 05-04-2012 at 01:38 PM..
Last edited by tu tu; 05-04-2012 at 01:39 PM..
15-10-2008, 01:44 PM
ပို့စ် 22 ခုအတွက် 59 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ falcon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-05-2009, 01:53 PM
HR Management နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့စာအုပ်တွေပါ.
ပြန်စာ - Risk and Financial Management
Risk and Financial Management က Password က www.myanmarfamily.org တည့်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။wrong Password တဲ့ ။ မေဦးဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ ။
28-05-2009, 06:27 AM
Originally Posted by sawjonnie
အဲဒီမှာလေ မေဦးရဲ့။ password က WWW.Myanmarfamily.Org ပါ။
အရင်က သတ်မှတ်ထားတာက www.myanmarfamily.org ပါ။
ဖိုရမ်က ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ရင် အဲဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခုခုနဲ့ ဖွင့်ပါ။
Last edited by tu tu; 28-05-2009 at 06:27 AM..
ပို့စ် 112 ခုအတွက် 882 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီနေရာလေးမှာ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းမယ့် စာအုပ်လေးတွေ တင်ပေးကျပါနော်..။
ပထမဆုံး ကျွန်တော်က ပဲ စတင်ပါ့မယ်.. အားလုံးသိပီးသားပါ.. Rich dad and Poor dad ဆိုတဲ့
အင်္ဂလိပ်လို စာအုပ်လေးပါ ..။
Last edited by Hlwamkoko; 14-03-2012 at 03:02 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Hlwamkoko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, putty, regme, tu tu
ူLink တွေက မရတော့ဘူး (How to writeabusiness plan ), ( Past,present and future of retail market)
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Khin Maung naing အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Khin Maung naing ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Khin Maung naing
Originally Posted by Khin Maung naing
How to writeabusiness plan ဆိုတဲ. စာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ putty အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
minlatt, PyaitSone, regme
တည်နေရာ: လမ်းတစ်ကွေ့ 
ပို့စ် 193 ခုအတွက် 1,953 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပို့ စ်15 မှ Integrating ERP, CRM, Supply Chain Management, and Smart Materials
ပို့ စ် 16 မှ Philip Kotler ရဲ့Marketing Management
ပို့ စ် 17 မှ Blue Ocean Theory တွေဒေါင်းလို့ မရဖြစ်နေလို့ ပါ ။ အဆင်ပြေရင်ပြန်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။
" Make each and everyday counts! "
Wang Lee Hom - Heart Beat (2009)
Last edited by minlatt; 04-04-2012 at 11:06 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ minlatt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by minlatt
အချိန်ကို စနစ်တကျစီမံ ခန့်ခွဲလိုသူတွေအတွက် Marc Marcini ရေးထားတဲ့ Time Management ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ..။
ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ နာရီတိုင်းကို ဘယ်လို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချပြီး လုပ်ငန်းတွေ ပြီး မြောက်စေဖို့ နဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက် Time Management ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်..။ သူရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေကတော့ မိမိနေထိုင်မှု ဘ၀မှာ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းလာမယ်၊ မိမိကိုယ်ကို ပိုမို ယုံကြည်မှု တွေ ရလာမယ်၊ စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး၊ ကြီးကျယ်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဆီကို တက်လှမ်း နိုင်မယ် ဆိုပြီး ညွှန်းဆိုထားပါတယ်..။ စာအုပ်ဆိုတာ ဖတ်တာနဲ့ တင် မလုံလောက်ပါဘူး .. တကယ်လက်တွေ့ ဘ၀ ထဲ ကျင့်သုံးနိုင်မှသာ အနှစ်သာရ ရှိမှာပါ..။
Time is finite. We have only so many hours available inaday to live our lives, accomplish the tasks that we need to accomplish, and enjoy our lives. Every minute we waste in frustration overatask that seems overwhelming isaminute subtracted from the time we’ve allotted to enjoy life. Even our jobs should provide us with pleasures—asense of accomplishment, the gratification of recognition forajob well done, and financial rewards, too—that enable us to enjoy our personal lives even more. It can be done. Less stress, more confidence, reduced frustration, greater fulfillment— these are all benefits that flow from leadingatime-managed life. Our hope is that Time Management will help you achieve all these things and more.
Last edited by Hlwamkoko; 05-04-2012 at 11:12 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Hlwamkoko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by minlatt
bagothar85, Hlwamkoko, minlatt
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ Communication, Leadership & Management ဆိုတဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ.. လူအသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ နေမယ်ဆိုရင်တော့ Communication ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်..။ ကိုယ်က အသက်လေးရလာ .. အထက်ပိုင်း ရာထူးလေး ရလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ Management ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်... Leadership ဆိုတဲ့ ဦးဆောင်မှု ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အခန်းလေးတွေက အရေးပါလာပြန်ပါတယ်.. ။ အဲဒီအတွက် ဒီစာအုပ်လေးက မိသားစုဝင်တွေအတွက် တစ်နည်းတစ်ဖုံ အထောက် အကူပြုမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ.. ။
စာအုပ်အမည် : Communication, Leadership & Management (Pages - 50)
Credit to : ဒေါက်တာ စနေ (MMTEASHOP)
PDF By : Hlwamkoko
Up loader : Hlwamkoko
Management Process ကို အိမ်တွင်းဟင်းချက်ပုံလေးနဲ့ပဲ လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်..။
နိုဝယ့်အိမ်မှာ ထမင်းစုစားဖို့ စီစဉ်တယ်ဆိုကြပါစို့။ မိနိုဝယ် ခေါင်းခဲရပြီ။ ဘာဟင်းချက်ရမလဲပေါ့။ ကောင်းပြီ။ အားလုံးစားတဲ့ ကြက်သားဆီပြန်ချက်မယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Goal ပါ။ အဲဒီမှာ နိုဝယ် ချရေးရပြီ စာရွက်နဲ့။ ဘာတွေလိုလဲ။ ကြက်သားဝယ်ရန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သွန်၊ ငရုတ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီမှာပြီးတော့ အိမ်မှာ ဘာရှိတယ်၊ ဘာကလိုတယ် ဆိုပြီး လုပ်ရပြီ။ အဲဒါ Planning ပဲ။
နောက်နေ့မနက်ကျ ဈေးသွား။ လိုတာဝယ် သေချာရွေးရ ရှာရနဲ့က Organizing ဗျ။ အိမ်လဲရောက်ရော ကြက်သားကိုင်၊ ဆီချက်၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီသပ်၊ ကြက်သားထည့်၊ ဟင်းအနှစ်နဲ့ ရေနဲ့ထည့်တာ ဘာညာက Leading Process ကိုလုပ်တာဗျ။ အဲခဏကြာမွှေကြည့်၊ နူးမနူး ကြည့်၊ ပေါ့လားငန်လား မြည်းတာ Monitoring ပေါ့။ လိုတာထပ်ပြင် ဆားနဲနဲထပ်ထည့် ဟင်းခပ်မှုန့်ထည့်တာ Controlling ၊ ဟင်းအိုးချ ဟင်းခွက်ထဲထည့်၊ စားပွဲပြင် ထမင်းခူးခပ်တာတွေက Coordination ပဲဗျ။ ကဲအားလုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတဲ့ Goal ကိုရရောပေါ့။
ကဲဒါဆို နိုဝယ်တစ်ယောက် Process တစ်ခုကို Management လုပ်လိုက်တာပဲလေ ဟုတ်ဖူးလား။
Last edited by Hlwamkoko; 03-05-2012 at 11:20 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Hlwamkoko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, Lwin Thu, tu tu
ပြန်စာ - Business E Books
Invalid or Deleted File. ဖြစ်နေတယ်အစ်ကို နောက်ထပ်လင့်လေးရှိရင် တင်ပေးပါဦး
Find More Posts by regme
ebook ဒေါင်းလုပ် website များ sunmoon E-Books & Tutorials 35 18-01-2014 10:50 AM
WordPress Ebooks ကိုပိုင် E-books မျာ6း13-03-2009 11:53 PM